फिर्ता रकम नीति - कोम
Kdom मा किनमेलको लागि धन्यवाद!
हाम्रो उच्च माग र--स्टार ग्राहक संतुष्टि दरको कारण, हामी कडाईका साथ कुनै फिर्ती, फिर्ती, वा हाम्रो उत्पादनहरूमा विनिमय गर्दैनौं।
In सबैभन्दा पहिले केस, सबै बिक्री अन्तिम छन्
अक्सर सोधिने प्रश्न: तपाईं किन फिर्ती, फिर्ती, वा विनिमय अनुमति दिनुहुन्न?
किन हामी फिर्ती र फिर्ताको लागि अनुमति दिदैनौं किनभने हाम्रा वस्तुहरू धेरै सीमित छन् र अनुकूलित तपाईंको लागि अनुकूल छ। यदि ग्राहकले निर्णय गरे कि तिनीहरू आईटम फिर्ता गर्न चाहन्छन्, यो त्यस्तो कुरा होइन जुन हामी अन-प्रिन्ट गर्न सक्दछौं र त्यसकारण यसले पूर्ण फोहर नै हुन्छ। एउटा कारक जुन हामी लिन्छौं त्यो हो प्रायः मानिसहरू आवेग मार्फत अनलाइन खरीद गर्छन्। प्रायः, तिनीहरू खरीदको केहि घण्टा पछि पछुताउँछन् र फिर्ता रकमका लागि विक्रेतालाई सम्पर्क गर्छन् किनकि तिनीहरूले यसको बारेमा उनीहरूको मन परिवर्तन गरे। हामीले यसलाई एउटा सामान्य उपभोक्ता व्यवहारको रूपमा देख्यौं र त्यसैकारण हामीले निर्णय गर्यौं कि हामीले पहिले पाएको आरम्भिक फिर्ती नीति हटाउनु हाम्रो भलाईको लागि छ।
हामी तपाईलाई खराब चीजको रूपमा सोच्न चाहँदैनौं। एक टोलीको रूपमा, हामी १००% यो सुनिश्चित गर्न हाम्रो उचित परिश्रम गर्नेछौं कि हामी तपाईंको नयाँ व्यापारको साथ एक ग्राहकको रूपमा तपाईंलाई सन्तुष्ट गर्न हामी सक्दो गरिरहेका छौं।
कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि आइटम, आकार, र रंग अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया लागू गर्न सक्ने मापनहरू पठन गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि कुनै समस्या भएमा र यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिएमा, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस तुरून्त र हामी सकेसम्म चाँडो तपाईं फिर्ता हुनेछ।
मुद्दाहरू sizing को जोखिम कम गर्न, हामी हाम्रो उत्पाद विनिर्देश पृष्ठहरूको लागि साइजिंग चार्ट प्रदान गर्दछौं क्यानभास जुत्ता, साबर जुत्ता, स्नीकरहरू, पर्ची, टम्स शैली, फ्लिप फ्लप.
गलत छापिएको / बिग्रिएको / दोषपूर्ण आईटमहरूको लागि कुनै पनि दावी उत्पादन प्राप्त भए पछि days० दिन भित्र सबमिट गर्न अनिवार्य छ। ट्रान्जिटमा हराएको प्याकेजहरूको लागि, सबै दावीहरू अनुमानित वितरण मिति पछि days० दिन पछि पेश गर्नुपर्नेछ। दावी हाम्रो पक्षमा त्रुटि मानिएको हाम्रो खर्चमा कभर गरिएको छ।
यदि तपाइँ उत्पादनहरूमा वा अर्डरमा केहि अरू कुरा देख्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई support@thekdom.com मा ईमेल गर्नुहोस्
फिर्ता ठेगाना हाम्रो कारखाना मा पूर्वनिर्धारित द्वारा सेट गरीएको छ। जब हामी एक फिर्ती ढुवानी प्राप्त गर्दछौं, एक स्वचालित ईमेल सूचना तपाईंलाई पठाइनेछ। दावी नभएको रिटर्न charity० दिन पछि दानमा दान हुन्छ। यदि हाम्रो कारखाना फिर्ताको ठेगाना को रूपमा प्रयोग गरीएको छैन भने, तपाईले प्राप्त गर्नुभएको कुनै फिर्ती ढुवानीका लागि उत्तरदायी हुनेछ।
फिर्ताका लागि कारणहरू:
गलत ठेगाना - यदि तपाइँले कुरियर द्वारा अपर्याप्त मानिने ठेगाना प्रदान गर्नुभयो भने, ढुवानी हाम्रो सुविधामा फिर्ता हुनेछ। एकचोटि हामीले तपाईंसँग अद्यावधिक गरिएको ठेगाना पुष्टि गरिसकेपछि तपाईं पुन: स्थापना लागतहरूको लागि उत्तरदायी हुनुहुनेछ।
दावी नभएको - दावी नगरी जाने शिपमेन्टहरू हाम्रो सुविधामा फर्किन्छन् र तपाईं पुनः स्थापनाको लागतको लागि जिम्मेवार हुन्छन्।
ग्राहक द्वारा फिर्ता - यो उत्तम हो कि तपाईले हामीलाई कुनै पनि उत्पादनहरू फर्काउनु अघि सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी खरीददारको पश्चातापको लागि अर्डर फिर्ता गर्दैनौं।
एकचोटि हामीले तपाईंको वस्तु प्राप्त गर्यौं, हामी यसको निरीक्षण गर्नेछौं र तपाईंलाई सूचित गर्नेछौं कि हामीले तपाईंको फिर्ती प्राप्त गरिसकेका छौं
वस्तु हामी तपाईंलाई तुरून्त तपाईको फिर्ताको स्थितिको बारेमा आईटमको निरीक्षण पछि सूचित गर्नेछौं।
यदि तपाईंको फिर्ती स्वीकृत भयो भने, हामी तपाईंको क्रेडिट कार्डमा फिर्ता रकम (वा भुक्तानीको मौलिक विधि) शुरू गर्नेछौं।
तपाइँको कार्ड जारीकर्ताका नीतिहरूमा निर्भरता, तपाइँले केही दिन भित्र क्रेडिट प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अर्को आफ्नो बैंक सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यहाँ रकम फिर्ता पोष्ट हुनु अघि प्राय: केहि प्रशोधन समय हुन्छ।
यदि तपाईंले यी सबै गर्नुभयो र तपाईंले अझै आफ्नो फिर्ती प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
तपाईं आफ्नो सामान फिर्ताको लागि आफ्नै शिपिंग लागतहरूको लागि भुक्तानको लागि जिम्मेवार हुनुहुनेछ। शिपिंग लागत गैर रकम फिर्ता योग्य हो।
यदि तपाईंले फिर्ती प्राप्त गर्नुभयो भने, फिर्ती शिपिंगको लागत तपाईंको फिर्ती रकमबाट घटाइनेछ।
यदि तपाइँसँग तपाइँको वस्तु हामीलाई कसरी फर्काउने बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
कृपया, नहिचकिचाउनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस यदि कुनै पनि समस्याहरु छन् वा यदि तपाईलाई कुनै प्रकारको सहयोग चाहिन्छ भने।